UShungite ngumnyama, okhazimlayo, ongenamakhristal mineraloid-ividiyo
Intsingiselo yelitye leShungite kunye neepristal zokuphilisa.
Thenga amatye anqabileyo kwindalo yethu
I-Shungite yinto emnyama, eqaqambileyo, engeyiyo i-crystalline mineraloid equlathe ngaphezulu kwe-98 yepesenti yobunzima bekhabhoni. Ichazwe okokuqala ukusuka kwidiphozithi kufutshane nelali kaShunga, e-Karelia, e-Russia, apho ifumana khona igama layo. Ilitye kuye kwaxelwa ukuba linemilinganiselo yokulandelwa kwe-fullerenes (0.0001 <0.001%).
Intsingiselo yelitye likaShungite
Igama elithi "shungite" ekuqaleni lalisetyenziswa ngo-1879 ukuchaza i-mineraloid engaphezulu kwe-98 yepesenti yekhabhoni. Kutshanje eli gama sele lisetyenziselwe ukuchaza amatye athwala i-shungite, akhokelela ekudidekeni. Ilitye liye lahlulwa kuphela kumxholo wekhabhoni, kunye ne-shungite-1 enomxholo wekhabhoni kuluhlu lwama-98-100 epesenti kunye ne-shungite-2, -3, -4 kunye -5 ezinokuqulathiweyo kumanqanaba angama-35-80 , 20-35 ipesenti, iipesenti ezili-10 ukuya kuma-20 nangaphantsi kwipesenti ezili-10 ngokwahlukeneyo. Olunye ulwahlulo, Iliwa lahlulwe laba likhazimla, likhanye kancinci, lingacacanga kwaye libuthuntu ngokwesiseko salo.
I-crystal ineendlela ezimbini eziphambili zenzeke, zisasazwa ngaphakathi kwidwala lokubamba kunye nezinto ezibonakalayo ezidibeneyo. I-shungite ehambileyo, engamatye aqaqambileyo, itolikwe ukuba imele ii-hydrocarbon ezifudukayo kwaye ifunyenwe njengomaleko, iileya okanye iilensi ezikufutshane nokuhambelana nokubekwa kwamatye, okanye umthambo, ofumaneka njengemithambo enqamlezayo. Inokuthi yenzeke njengamaqhuqhuva ngaphakathi kwamatye amancinci.
Ilitye eliyigugu ukuza kuthi ga ngoku lifunyenwe ikakhulu eRashiya. Eyona dipozithi iphambili ikwindawo yeLake Onega yaseKarelia, eZazhoginskoye, kufutshane neShunga, kunye nokunye ukwenzeka eVozhmozero. Ezinye izehlo ezincinci zimbini zixeliwe eRashiya, enye eKamchatka kumatye eentaba-mlilo kwaye enye yenziwa ngokutshiswa kwamaxhoba kumgodi wamalahle kubushushu obuphezulu eChelyabinsk. Ezinye izehlo zichaziwe zivela e-Austria, India, Democratic Republic of Congo nase Kazakhstan.
Eli litye lithathwa njengomzekelo we-abiogenic petroleum formization, kodwa imvelaphi yayo ngokwebhayiloji sele iqinisekisiwe. Iigugu ezingafuduswanga zifunyanwa ngokuthe ngqo ngokungqinelanayo ngaphezulu kweedipozithi ezazenziwe kwishelufa yamanzi engekho nzulu ye-carbonate kwimo engumphunga wolwandle. Ulandelelwano lwe-shungite olucwangcisiweyo kucingelwa ukuba lubekwe ngexesha lokurhafisa okusebenzayo, ngokuhambelana namatye e-alkaline e-volcanic afunyanwa kulandelelwano. Izidalwa ezinobutyebi bezinto eziphilayo mhlawumbi zafakwa kwindawo e-brackish lagoonal. Uxinzelelo lwekhabhoni lubonisa amanqanaba aphezulu emveliso yebhayoloji, mhlawumbi ngenxa yamanqanaba aphezulu ezondlo ezifumaneka kwizinto ezingena mlilo.
Idipozithi ethwele i-shungite-bearing deposits egcina i-sedimentary structures itolikwa njenge-metamorphosed source rock rock. Olunye ulwakhiwo olumilise okwamakhowa luchongiwe, nolutolikwa njengentaba-mlilo yodaka. Iintlobo zomaleko kunye nemithambo, kwaye izalisa ii-vesicles kwaye yenze i-matrix kwi-breccias, itolikwa njenge-petroleum efudukayo, ngoku ekwimo yebhitumene ebunjiweyo.
Idiphozithi yelitye iqulethe ingqikelelo yekharbhoni engaphezulu kwama-250 gigatonnes. Ifunyanwa kulandelelwano lwePalaeoproterozoic metasedimentary kunye ne-metavolcanic rock egcinwe ngokulandelelana. Ulandelelwano ludweliswe kukungena kwe-gabbro, okunika umhla we-1980 ± 27 Ma, kunye needolomites ezingaphantsi, ezinika iminyaka engama-2090 ± 70 Ma. Zili-XNUMX izaleko ezithwala i-shungite ngaphakathi kweZaonezhskaya Formation, ukusuka embindini wolandelelwano olulondoloziweyo. Kwezi zinto zityebileyo ngumaleko wesithandathu, okwabizwa ngokuba yi "Productive horizon", ngenxa yokuxinana kwamatye. Iidiphozithi ezine eziphambili zaziwa zivela kuloo ndawo, i-Shungskoe, Maksovo, Zazhogino kunye neNigozero. Idiphozithi yaseShungskoe yeyona ifundwayo kwaye isombiwa ikakhulu.
Eli litye belisetyenziswa njengonyango lwasekhaya ukusukela ekuqaleni kwenkulungwane ye-18. UPeter the Great wamisela i-spa yokuqala yaseRussia e-Karelia ukuze asebenzise iipropathi zokucoca amanzi. Ukwaphembelele ukusetyenziswa kwayo ekuboneleleni ngamanzi ahlambulukileyo omkhosi waseRussia. Iimpawu zokulwa ne-bhakteria yekristale ziqinisekisiwe ngovavanyo lwangoku.
Sele isetyenzisiwe ukusukela embindini wenkulungwane ye-18 njenge pigment yepeyinti, kwaye ngoku ithengiswa phantsi kwegama elithi "carbon black" okanye "shungite black natural".
Ngama-1970, yaxhatshazwa kwimveliso yezinto ezikhuselekileyo, ezibizwa ngokuba yi-shungisite. I-Shungisite ilungiswa ngokufudumeza amatye anezinga eliphantsi ukuya kwi-1090-1130 ° C kwaye isetyenziswa njengesixhobo sokuzalisa esixineneyo.
Intsingiselo yelitye likaShungite kunye neepristal ezibonakalayo zokuphilisa iipropathi
La matye akholelwa ukuba aneempawu ezinokuphucula impilo yengqondo yakho, umzimba kunye nomphefumlo ngeendlela ezahlukeneyo.
Intsingiselo yelitye leShungite kunye neepristal metaphysical ukuphilisa iipropathi lilitye elincomekayo lomhlaba. Ukungcangcazela okuphezulu kunceda ukuzisa iipropathi zomzimba wakho wokomoya ezantsi kwinqwelomoya ukuze ukwazi ukudibanisa ubulumko be cosmic kunye nezifundo zekarmic. ilitye licoca ngamandla kwaye ligxotha izinto ebomini bakho ezinokuchitha amandla akho.
Ukususela kumaxesha amandulo, i-gem yayisetyenziselwa ukucoca amanzi. Oku kungenxa yomsebenzi wayo otyholwayo ngokuchasene neentsholongwane kunye neentsholongwane.
Uphononongo lwango-2018 luthi i-shungite erhabaxa inokucoca amanzi ngokususa ukungcola kunye nezinto eziphilayo ezinje ngamayeza okubulala izitshabalalisi. Uphononongo lwango-2017 lukwafumanise ukuba ikhabhoni esuka kwi-shungite ingasusa iikhompawundi ezinemitha ye-radio emanzini.
Ukuba unengxaki yoxinzelelo, unxunguphalo, okanye uziva ukhathazekile, zama ukunxiba isiziba sobucwebe be-shungite. Nangaliphi na ixesha uziva uxakekile, yiza nengqwalasela yakho apho ilitye linxibelelana nomzimba wakho, uvale amehlo, kwaye ujonge ukuphefumla kwakho. Ukuphefumlela ngaphakathi ukubala kwe-XNUMX, bamba inani le-XNUMX, uze uphefumle inani eline. Oku kuphefumla okunzulu, okunesingqi kuya kukubuyisela kwiziko lakho kwaye kuya kunceda ukudala ukuthula engqondweni yakho.
Ngaba i-shungite inezinto zokuphilisa?
Intsingiselo yelitye likaShungite kunye neepristal zokuphilisa ngokunyanga ukucoca umzimba kunye nokuchithwa emzimbeni, iipropathi zayo zokunyanga zingena nzulu kwimimandla yeemvakalelo nezomoya, zivumela nabani na osebenza ne-shungite ukuba acoce amandla abo amandla ayingozi okanye angafunekiyo.
Ndingayifaka phi i-shungite endlwini yam?
Beka ilitye ecaleni kwebhedi yakho okanye phantsi komqamelo. Ngokufanayo, unokubeka iphiramidi ecaleni kweliso lakho okanye kwimicrowave. Ncamathisela isitya se-vrystal kwiphepha elingasemva lefowuni yakho ephathekayo. Unako ukunxiba i-gem ngohlobo lwezinto zokuhombisa kunye namakhubalo.
Ngaba kukhuselekile ukunxiba i-shungite?
Ukunxiba i-shungite akuyi kwenza kuphela ukuba i-chakra iphilise ngakumbi, kodwa iya kuthi inciphise amandla akhutshwa kwi-chakra evaliweyo okanye engasebenziyo. Ukungathathi cala kumandla kuya kukuvumela ukuba uziqhelanise ngokukhuselekileyo nokuphilisa i-chakra kunye nokubuyisela ibhalansi kwingcambu.
Ungazi njani ukuba i-shungite iyinyani?
Umbala omnyama onamandla luphawu lokuqala lokwahlula ilitye lokwenene. Ihlala ine-infusions yombala omdaka, ngwevu okanye golide. Le yimizila yezinye izimbiwa ezinje nge-pyrite, ezifumaneka kumaleko omnye.
Uzihlambulula njani iikristali zakho?
Faka i-crystal yakho kwindawo yokuhlambela ngamanzi ubusuku bonke, okanye uyibambe phantsi kwamanzi apholileyo apholileyo imizuzu embalwa. Amanzi etyuwa aya kucoca iikristali. Sebenzisa amanzi olwandle okanye umxube owenziwe nge-1-2 yeetispuni zetyuwa echithwe ngokupheleleyo kwii-ounces ezi-8 zamanzi. Yipule ikristale yakho emanzini acocekileyo xa ugqibile.
Thenga amatye anqabileyo endalo kwivenkile yethu yamatye
Senza ubucwebe bamatye e-shungite yekristale kwintengiso njengeeringi zokuzibandakanya, izacholo zomqala, amacici e-stud, izacholo, izacholo… Nceda Qhagamshelana nathi ngesicatshulwa.